နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေး လှုပ်ရှားမူအဖွဲ့(10D) မှ နိုင်ငံရေးသုံးသပ်ချက်နှင့် သဘောထားကြေညာချက် ထုတ်ပြန် | ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးစု အသံ
နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေး လှုပ်ရှားမူအဖွဲ့(10D) မှ နိုင်ငံရေးသုံးသပ်ချက်နှင့် သဘောထားကြေညာချက် ထုတ်ပြန်
‘၂၁နှစ်မြောက်၊ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေး နိုဗယ်ဆု ရရှိခြင်းနှင့် ထောက်ခံ ဆန္ဒပြခဲ့သော ကျောင်းသား လူငယ်များ (10D)’ အမှတ်တရ အခမ်းအနားကို ဒီဇင်ဘာ ၁၀ရက်နေ့ က ရန်ကုန်မြို့ ယုဒဿန် ရိပ်သာ၊ မာလာဆောင်တွင် နံနက်၉နာရီမှ ၁၁း၀၀နာရီထိ ကျင်းပခဲ့ကြောင်း သိရသည်။ အဆိုပါအခမ်းအနားတွင် နိုဗယ် ငြိမ်းချမ်းရေး လှုပ်ရှားမူ အဖွဲ့(10D) မှ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေသော နိုင်ငံရေး သုံးသပ်ချက်နှင့် သဘောထားကြေညာချက် တစ်စောင် ထုတ်ပြန်ကြေငြာခဲ့ပါသည်။
ထို အခမ်းအနားသို့ NLD ပါတီဌာနချုပ် နာယက သူရဦးတင်ဦး၊ ဦးကိုကိုကြီး၊ ဦးမြင့်ဆွေ၊ ဦးဇေယျ၊ ကိုသိန်းဆွေ (NLD အမတ်လောင်း)တို့နှင့် ဖိတ်ကြားထားသော ဧည့်သည်တော်များ တက်ရောက်ခဲ့ကြသည်၊၊
အဆိုပါ အခမ်းအနားတွင် ကိုသန်းထိုက်ဝင်းနှင့် ကိုဆန်းမြိုင်(သားလေး)တို့မှ အခမ်းအနားမှူးအဖြစ် ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီး ဦးတင်ဦးမှ အဖွင့်အမှာ စကား ပြောကြားခဲ့သည်။ဦးမြင့်ဆွေမှ သဘောထား ကြေညာချက် စာတမ်းနှင့် ကိုဇေယျမှ လက်ရှိနိုင်ငံရေး အခြေအပေါ် သုံးသပ်တင်ပြချက် စာတမ်းကို ဖတ်ကြားခဲ့သည်။ဆက်လက်၍ ကိုသိန်းဆွေမှ ကျေးဇူးတင်စကား ပြောကြားခဲ့ပြီး အခမ်းအနားကို ရုတ်သိမ်းခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
အခမ်းအနားတွင် ရခိုင်ပြည်နယ်တွင် ဖြစ်ပေါ်နေသော ပြဿနာများအား ဖြေရှင်းရန် အဓိက လိုအပ်ချက်မှာ ဒီမိုကရေစီနှင့် လူ့အခွင့်အရေး အပြန်အလည် ပေါ်ပေါက် ထွန်းကားရန် အမျိုးသားပြန်လည် သင့်မြတ်ရေး ဖြစ်ပေါ်ရန် လိုအပ်ကြောင်း နိုဗယ်ငြိမ်းချမ်းရေး လှုပ်ရှားမူ အဖွဲ့(10D)က သုံးသပ် ပြောကြားခဲ့သည်။
This entry was posted on December 12, 2012, in ပြည်တွင်းသတင်း. Bookmark the permalink.	Leaveacomment
← ပည်မြို့ မွတ်စလင်သုဿာန် အဟောင်းတွင် မြှုပ်နှံ့မှုကြောင့် တရားစွဲခံရသူ ထောင်ဒဏ်ချမှတ်ခံရ
အစ္စလာမ့်အဖွဲ့အမည် မှားယွင်းဖော်ပြမှု့ မြန်မာ သံတော်ဆင့် မှ ပြင်ဆင်ချက် မထည့်ပေးသေး →